Iran: Lehilahy Voatora-bato Ho Faty Rehefa Avy Nigadra 11 Taona An-tranomaizina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jona 2017 8:08 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Español, Français, Português, বাংলা, 日本語, English
Notoraham-bato ho faty tao Takestan, ao amin'ny faritanin'i Qazvin i Jafar Kiani tamin'ny 5 Jolay, rehefa avy nigadra 11 taona tany am-ponja. Ny fanitsakitsaham-bady no heloka bevava niampangana azy. Nogadraina nandritra ny 11 taona niaraka tamin'ireo zanany roa kely ihany koa ny sakaizany, Mokarameh Ebrahimi, ary mety ho ao anaty lisitra manaraka. Toa ireo mpitandro filaminana ihany, fa tsy sivily, no nandray anjara tamin'ny fitoraham-bato.
Niampanga ny famonoana ho faty ny Amnesty International sy ny fikambanana hafa mpiaro ny zon'olombelona. Niantso ny governemanta Iraniana izy ireo mba tsy hitora-bato an'i Ebrahimi. Nivoaka tamin'ny fampahalalam-baovao mahazatra sy fampahalalam-baovao an'olo-tsotra ny vaovao.
Nitsidika ny tanàna nisian'ny tora-bato i Asieh Amini, bilaogera sady mpanao gazety ary niresaka tamin'ny olona tao. Nivoaka tamin'ny bilaogy sy tranonkala maromaro ny tatitra nataony momba ny fitoraham-bato, anisan'izany ny tranonkala Meydaan.
Mangina ny tanàna; lahiantitra vitsivitsy monja no teny an-dalambe. Nisy ankizy iray nipetraka teo ambony tamboho. Nitsiky fotsiny ny lehilahy voalohany nanontaniako momba ny tora-bato fa tsy niteny na inona na inona. Fantatro avy eo fa marenina izy. Satria naveriko mafy foana ny fanontaniako, nanamarika ny ankizy. Nanontany azy aho. Tsy niteny na inona na inona koa izy. Nisy moto nandalo. Nantsoiko izy. Ary nijanona. Ary nanamafy ny vaovao avy hatrany; nanondro havoana izy. Nanontany aho hoe, “Tena marina ve?”
- Ny tenako no nahita
– Tsia. [mitsiky] Lavidavitra. Tsy mamela ny olona hanatona akaiky izy ireo.
– [nanondro ny halavirana] Feno polisy manerana ity faritra ity. Nakatona ny lafiny roa amin'ity lalana mamovoka ity ary tsy misy olona afaka mandeha eo afa-tsy ny manampahefana.
– Firy teo izy ireo?
– Tsy fantatro. Maro be. 50. 60. Angamba.
– Ka azonao antoka ve fa tsy nisy olona avy ety an-tanàna nitora-bato?
– Eny, azoko antoka. Tsy nisy
Z8tun nanome [Fa] teoria samihafa momba izany tantara izany ary miantso an'i Kiani ho “maritioran'ny fitiavana”. Nilaza tranga vitsivitsy ity bilaogera ity: 1- Noteren'ny vadin'i Ebrahimi hivaro-tena izy; 2- Nangataka fisaraham-panambadiana izy saingy tsy manan-jo hisara-bady ny vehivavy ao Iran; 3- Nifankatia ireo olona roa ireo ary nifamonjy; 4- Tsy nisy olona tao an-tanànan'izy ireo vonona hitora-bato azy, izay nahatonga ny manampahefana namindra azy tany amin'ny tanàna lavitra.
Fitoraham-bato sy ny fifandraisana iraisam-pirenena!
Mohammad Ali Abtahi, mpitondra fivavahana sady bilaogera kosa nanondro ny mpitsara izay nanome baiko ny fitoraham-bato an'i Kiani, ary nilaza [Fa] fa tena hafahafa ny mieritreritra hoe manao izay vitany ny olona iray mba hotoraham-bato ny hafa, na dia eo aza ny ezaka fanakanan'ny manampahefan-dalàna sy ny fivavahana. Tsy mino i Abtahi fa noho ny fanoheran'ny vahiny ny fitoraham-bato no nahatonga ilay mpitsara hihantsy azy ireo tamin'ny alalan'izany baiko fitoraham-bato izany. Nilaza koa izy fa mifanohitra tanteraka amin'ny fahaleovantenantsika ny manao zavatra fotsiny satria hoe manohitra izany ny vahiny, toy ny manaraka an-jambany ny fitakian'ny vahiny.
Nilaza izy fa manana fahafahana hampifanaraka ny tenany amin'ny fotoana sy ny toerana ny Islamo, ary ny tena zava-dehibe kokoa dia ny manapa-kevitra raha tiantsika ny hovonoina amin'ny tora-bato amin'ny anaran'ny finoana islamo.
Tantaran'ny vono olona sy ny fahantrana
Shahrzad naneho hevitra [Fa] momba ity tantara ity ary nilaza fa ny olona mahantra ihany no toraham-bato ao amin'ity firenena ity, ny manankarena kosa mahita fomba hialàna foana.
Maro ireo hanao tsoa-kevitra tahaka ny View from Iran (Fijery avy ao Iran) hoe: Vono olona mazava sy tsotra izao ny fitoraham-bato….